I-Google iyazi ukuthi ukuphi, noma ngabe uyayivula indawo | Izindaba zamagajethi
I-Google iyazi ukuthi ukuphi, noma ngabe unikwe amandla indawo
Android Akuyona kuphela uhlelo olusetshenziswa kakhulu lweselula emhlabeni, kunjalo emazweni afana neSpain ubukhona bayo bumele cishe ubukhosi, futhi ukuthi cishe amaphesenti angama-85 abasebenzisi abasebenzisa umakhalekhukhwini ezweni ababoshelwe ku-Android. Le yindlela iGoogle eguqule ngayo uhlelo lwayo lokusebenza lwaba cishe inkolo.
Noma kunjalo, amandla anjalo anezinto ezinhle futhi kwesinye isikhathi abuye abe nezinto ezimbi. Isibonelo esicacile ukuthi I-Google isanda kuqinisekisa ukuthi ayinendaba uma unendawo oyisebenzisayo noma cha, iyazi ukuthi ukuphi ngaso sonke isikhathi ... bakwenza kanjani lokho?
I-Google iqinisekisa ukuthi umsebenzisi uhlala etholakala, lokho kusho ukuthi phakathi kwezinye izinto, inkampani Ungabi mubi Isebenzisa le datha ukuyiqoqa bese iyithengisa ukudala amaphethini emakethe. Kodwa-ke ... ngabe ubucabanga ukuthi "uphephile" uma ukhubaza ukwenziwa kwendawo? Akukho okunye okuvela eqinisweni. I-Google isebenzisa ngokunenzuzo izinhlelo ze-antenna triangulation ukwazi ukuthi sikuphi ngaso sonke isikhathi. Lokhu kutholwe ngabafana be Quartz futhi impendulo emangazayo i-Google ekunikeze ukutholakala okunjalo ngokuqinisekile ngeke ikushiye ungenandaba.
Ngokuya nge-Google, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi sikuphi ngaso sonke isikhathi ukuze sithuthukise isivinini esithunyelwa ngaso imiyalezo nezaziso zohlelo lokusebenza. Lesi yisizathu esiholela kuGoogle ukuthi sitholakale njengoBig Brother weqiniso esikalini jikelele. Eqinisweni abanikanga imininingwane yokuthi lokhu kukuthonya kanjani ngempela ukwenziwa ngcono kwensizakalo. Okwamanje, okufanele ukwazi ukuthi ngeke ukwazi ukususa lolu hlelo lwendawo engunxantathu, ngakho-ke, Uma wenza kungasebenzi indawo, lokho kungenxa yokulondolozwa kwebhethri okucatshangelwayo, ngoba i-Google ihlala ikuthola ngendlela efanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Google iyazi ukuthi ukuphi, noma ngabe unikwe amandla indawo
I-Samsung Galaxy S9 ingavezwa ngesikhathi se-CES 2018
IHawaii neBelgium belwa namabhokisi emiklomelo emidlalweni yevidiyo